Cadaalad Baa Cindiga Deeqda. Waxa Qoray Mustafe Abdi Mohamed ‘Boqole’. – somalilandtoday.com
Cadaalad Baa Cindiga Deeqda. Waxa Qoray Mustafe Abdi Mohamed ‘Boqole’.
Xukuumadda somaliland waxa aan ka codsanaya in tabashada reerka Gar-xejis iyo Reeraha kale ee Somaliland ee gundhiga u ahaa aas-aaskii iyo unkudii qarankan Somaliland loogu magac daray la dhegaysto . Xaaladda amaanka gobolku si uu inoogu hanaqaado.
Waxaynu ogsoonahay in labada daraf ee xuduudaha Somaliland ka jirto xaalad siyaasad xumo. Mudane madaxweyne waxa aan ka codsanaynaa in aad sameyso xukuumad dhamaan reeraha somaliland degani ka dhex muuqdaan haday tahay ciidan iyo dhamaan mashaariicaha wadanka loo sinaado. Mudane madexweyne hadaad in yar u yar fiirsato dhamaan mansabyada dawlada ee xilalka sare iyo kuwa dhexeba in ay ka dhex muuqdaan hal reer.
2=Taliyaha ciidanka militeryga iyo badanka saraakiishooda.
3= Gudoomiyaga maxkamada sare
4= Laamaha wasaradaha ee shaqaalaha dawlada.
Mudane madexweyne reeraha dega somalilanad qaarba haysan xitaa rug saldhig inay maamulaan iska daa xil kale oo ay qabtaanbe. Halka reeraha qaarna darejada ciidanka intay doonaan ka qaataan iska dhaaf in ay sugaan bixinta sanadlaha ee darejooyinkee.
Mudane madexweyne hadaad aragtid mashaariicda Somaliland laga fuliyo ilaa 1991 waxa dadka badankiisu isku raacsan yihiin degaanba degaanku caasimada uga dhow yahay inay qadanaysay mashaariicda qaranka ugu badan.
Mudane madexweyne markii aad ahayd gudoomiyaha xisbiga Kulmiye dadku waxay isku raacsanaayeen saqiir iyo kabiirba in aad tahay ninka somaliland u cadaalad samayn lahaa. Waanay kaa war sugayaan in aad wadanka shacabka ku nool u cadaalad samaynayso welibana qof walbaa xaqiisa helayo iyo in aad mareyso meeshii kuwii kaa horeeyay mareen.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa baydad ka mid ah maansadii uu tiriyey abwaan Aadan Tarabi doorashdii madexweyne Egal AHUN ee ahayd.
Ama wax isma doorshaan
Durba laga wayiigiyo
Weel madhan sidaad noqon
Ama waqal onkadayoo
Wagac yidhi xareedoo
Na waraabiyaad noqon
Ama lagama wabaxsade
Wadaan lagama darre roob
Weedh iyo ufaad noqon.
Mustafe abdi mohamed ‘boqole.